Ogaden News Agency (ONA) – Warsaxaafadeed – Dil loo gaystay Hogaamiye ka mid ah Qaxootiga Ogadenya ee ku jira xerada Ifo- Kenya
Warsaxaafadeed – Dil loo gaystay Hogaamiye ka mid ah Qaxootiga Ogadenya ee ku jira xerada Ifo- Kenya
Posted by ONA Admin	/ August 20, 2011
Ogosto 20 2011
Gacan-ku-dhiigle ayaa dil toogasha ah ku dilay amin barqadii ah 19kii bishan Ogosto Allaha u naxariistee Cabdirizaq Cabdi (Tiibaa) oo ka mid ahaa hogaamiyayaasha Qaxootiga Somalida Ogadenya ee xerada Ifo oy maamulaan Qaramada Midoobay iyo Dawladda Kenya oo nabadgalyo siisay. Shahiid Cabdirizaq Tiibaa waxay da’diisu ahayd 50 jir wuxuuna ifka kaga tagay xaas ka kooban 3ex gabadhood iyo 6ex wiil.
Gacan-ku-dhiiglaha oo markii hore ka baxsaday goobta, ayay booliiska Kenya markii dambe soo qabteen, wuxuuna isku daygii baxsadkiisa ku dhaawacay sargaal ka mid ah booliskii qabtay oo ugu dambayntii dhigay xabsiga.
Wararka soo gaadhaya JWXO waxay muujinayaan inay jiraan qaar kale oo caawinayey gacan-ku-dhiiglaha. Waxaan ilaa hadda la baadhayaa qofka uu yahay dambiilaha iyo ujeedada uu u toogtay, iyadoo la sheegayo in mid kale la qabtay xalay oo loo haysto inuu ku lug leeyahay arintan.
Waa markii afaraad ee dil noocanoo kale ah loo gaysto muwaadiniin qaxootiga Ogadenya ee Kenya jooga sanadkan. 5tii Bishii Febraayo 2011 ayaa lagu toogtay xerada qaxaootiga ee Ifo- Dhadhaab Allaha u naxariistee Kamas Dhabar Jibarte iyadoo dhaawac halis ah uu gaadhay Roble Muse. Isla Febraayo 18kii 2011 waxaa lagu dilay magaalada Gaarisa Allaha u naxariistee Maxamad Dubad. Saddex bilood ka dibna oo ahayd 20kii bishii Juun ayaa laga afduubay Allaha u naxariistee Cabdi Cabdulaahi magaalada Nairobi oo maalin ka dib laga helay maydkiisii meel y ku soo tuureen. Inkastoo baadhitaano ay socdaan hadana wax loo qabtay ma jiraan dilalkaa foosha xun.
Xidhiidhka ka dhexeeya dhamaan dadkaa la dilay waxaa weeye inay ahaayeen dad ka soo horjeeda xukuumada Itobiya ee KT Meles oo diidan gumaysiga. Nidaamkan argagixiska ah ee lagu bartilmaansanayo qaar ka mid ah siyaasiyiinta shacabka Somalida Ogadenya ee jooga dawladaha dariska ah wuxuu sii shidi doonaa halganka ka socda Ogadenya wuxuuna gaadhsiin doonaa heer cusub oon horey loo arag taasoo wiiqi doonta nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika.
Wixii soo kordha waan idinla socodsiin doonaa.
waxa aan ku rajawaynahay in la ogaado dadka sida dabta ah ugu lug leh arintan mar hadii la qabtay gacan ku dhiiglihii dilka gaystay hada wax aan aad u gu rajawaynahay in uu sheegi doono dad badan oo ku lug lahaa dadkii laayey muwaadiniinta reer ogadenya guul iyo gobonimo